musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Boeing inogadza Chief Chief Officer
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Brian West, wenguva refu wezvemari uye bhizinesi mutungamiri ane ruzivo kune imwe nzvimbo yekugadzira zvinhu, kugadzira, zvigadzirwa, ruzivo rwepasirese ruzivo uye mamwe maindasitiri, anonzi Boeing CFO nyowani.
West ichatungamira zvese zvehurongwa hwezvemari hwaBoing, mashandiro, kuripota uye kuronga kwenguva refu bhizinesi, pamwe nehukama hwevatengesi, hupfumi, maneja, uye mashandiro ekuongorora.
West ichamhan'arira Boeing Mutungamiri uye CEO David Calhoun uye vachashanda kuKomisheni yeKanzuru.
West anotsiva Greg Smith, uyo akambozivisa hurongwa hwake hwekuenda pamudyandigere, unoshanda kutanga kwaKurume.
The Boeing Kambani nhasi inonzi Brian West semutevedzeri wemutungamiri wekambani uye mukuru wezvemari anoshanda Nyamavhuvhu 27, 2021.
Mune iri basa, West ichatungamira zvese zvehurongwa hwezvemari hwaBoing, mashandiro, kuripota uye kuronga kwenguva refu bhizinesi, pamwe nehukama hwevatengesi, hupfumi, mutungamiriri, uye mashandiro ekuongorora. West ichaonawo nezvekushandurwa kwebhizimusi rekambani uye ichave nebasa rekutarisira kambani yepasi rose yezvemari, Boeing Capital Corporation. Anozomhan'arira Boeing Mutungamiri uye CEO David Calhoun uye achashanda muKomisheni yeKanzuru.
"Brian ndiye mukuru akakodzera kushanda saBoing's anotevera CFO achipa masimba akakosha ekugadzirisa zvemari uye neruzivo rwekuronga kwenguva refu mumasangano akaomarara epasi rese muchadenga, maindasitiri ekugadzira uye ekushandira," akadaro Calhoun. "Ndakave nemufaro wekushanda naBrian kare, uye ndiye mutungamiri akasarudzika ane hunyanzvi hwekuita basa uye kuzvipira kuita pachena nevane chekuita kuchaendesa mberi kuita kwedu sezvatinoramba tichiisa pfungwa pakuchengetedza nehunhu, tichivandudza mashandiro edu nekushandura kambani yedu ramangwana."
West ajoina Boeing kutevera rakabudirira uye rakasiyana basa mune epamusoro mari uye mashandiro ekuita anotora maindasitiri akati wandei, kusanganisira muchadenga, kugadzira, zvivakwa, hutano, ruzivo rwepasirese ruzivo, zvemari uye manejimendi manejimendi. Akashanda semukuru wezvemari weRefinitiv kubvira 2018, uye aimbove CFO uye mutevedzeri mutevedzeri wemutungamiri weOp Operations yeOscar Health Insurance uye CFO uye COO yeNielsen. Asati aenda Nielsen, West akapedza makore gumi nematanhatu kuGener Electric, kwaakashanda seCFO yeGE Aviation uye CFO yeGE Engine Services. Dzimwe nzvimbo dzake dzehutungamiriri hwemari mumabhizimusi eG G dzaisanganisira mapurasitiki, kutakura uye simba.
West inhengo yebhodhi yekutanga yeConnecticut-based nonprofit sangano rine chinangwa chekugadzirira chizvarwa chinotevera chevatungamiriri vechikadzi vane hunyanzvi, nharaunda nekubatana kuti vabudirire munyika. Aimbove nhengo yebhodhi yeFuture 5, sangano rinobatsira vadzidzi vasina zvivakwa muStamford, CT kusvika pakukwanisa kwavo kuzere.
West anobata dhigirii reBachelor mune Zvemari kubva kuSiena College uye Master's muBusiness Administration kubva kuColumbia Bhizinesi Chikoro.
West anotsiva Greg Smith, uyo akambozivisa hurongwa hwake hwekuenda pamudyandigere, unoshanda kutanga kwaKurume. Iyo kambani yakatumidza zita kuti Dave Dohnalek, parizvino mutevedzeri wemutungamiri weBoeing uye Treasurer, kune chinzvimbo chenguva pfupi CFO kudzamara West ajoina kambani mukupera kwaNyamavhuvhu.
"Ndinoda kutenda Greg zvakare nemipiro yake yakatanhamara kuvashandi vedu, vatengi, nharaunda nekambani yedu mukati memakore ake anopfuura makumi matatu ekushanda neBoing," akadaro Calhoun. “Ndinodawo kutenda Dave nekutora hutungamiri hwepakati pesangano redu reMari. Nemakumi emakore ehutungamiriri ruzivo paBoing pamhiri kwemari, hukama hwevashambadziri, kuronga zvemari nezvimwe, Dave mutungamiri anoremekedzwa uye anoshanda uyo anounza nhungamiro ine ruzivo uye yakaenzana kusangano redu reMari panguva ino yeshanduko. ”